लगातार बढेको सुनको मुल्य आज ह्वात्तै घट्यो, तोलाको कति छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more लगातार बढेको सुनको मुल्य आज ह्वात्तै घट्यो, तोलाको कति छ ?
साउन २९ गते, २०७६ - १२:४९
काठमाण्डौ । साताको चौथो दिन अर्थात बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य घटेको छ । सुन आज तोलामा रु ७०० रुपैंयाँले घटेको हो ।
सुन बुधबार तोलाको ७० हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै, चाँदी बुधबार तोलामा ५ रुपैयाँ घटेर तोलाको ८ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
यसैबीच नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तत्काल पुराना गहना नबेच्न सबैसँग अनुरोध गरेको छ । भाउ बढेपछि व्यापार नै हुन छाडेको भन्दै पुराना सामान बेच्न नल्याउन महासंघले अनुरोध गरेको हो ।
साउन २९ गते, २०७६ - १२:४९ मा प्रकाशित